ကျွန်တော်လေ ကျွန်တော် - MYSTERY ZILLION
Vote Up0Vote Down natkhaung June 2008 Posts: 0Registered Users ကျွန်တော် နတ်ခေါင်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နာမည်ပေးတာတယ်ခင်ဗျ၊နည်းနညး်လောက်ရှုပ်ချင်လို့၊ ကူညီ ဖေးမ ကြပါခင်ဗျ	6 မှတ်ချက်များ sorted by Votes
Vote Up0Vote Down ညမီးအိမ် June 2008 Posts: 1,075Registered Users, Moderators ရှုပ်ပါဗျာ။ ဒီမှာဖြေရှင်းပေးဖို့ အစ်ကိုအစ်မတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာ။ :d	Vote Up0Vote Down á€±á€á€šá€¶ June 2008 Posts: 39Registered Users အဲဒီထဲမှာ ကိုညမီအိ်မ်က ပထမပဲ....ထွက်ပြေးမှာကိုပြောတာ..........ဟဲ ဟဲ နောက်တာနော် ..........ကိုညမီးအိမ်က ကျွန်တော့်အချစ်တော်ပါ...ဘာလို ့လဲဆိုတော့ မီးခဏခဏပျက်လို့..........natkaung အကိုကို ့ကြ ိုဆိုပါတယ်ဗျာ....ပေါင်းပြီးရှုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ .........admin တွေက သဘောကောင်းတယ်လို ့ပြောတယ်....	Vote Up0Vote Down yeman June 2008 Posts: 665Registered Users မင်္ဂလာပါ ကိုနတ်ခေါင် ...နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ :6:ကျွန်တော်ကိုတော့ မရှုပ်ပါနဲ့ဗျာ. . . ကိုယ်ဘာသာတောင် တော်တော်ရှုပ်နေလို့။:71: ကျန်တဲ့သူတွေကို ကြိုက်သလောက်သာရှုပ် . . .:dဟဲဟဲ စတာနော် . . . မဟုတ်ရင် ကျန်တဲ့လူတွေလိုက်ရိုက်လို့ပြေးပေါက်မှားနေမှဖြင့် :(( :106:သိချင်တာ မေးတာမေးပါ။ ဘာမှ အားမနာနဲ့။ သိတဲ့လူတွေ ပြောပြလိမ့်မယ်။:67: ကိုနတ်ခေါင်လည်း သိသလောက် ပြန်မျှပေါ့ . . .ခင်မင်လျှက် .........:6:	Vote Up0Vote Down MrDBA June 2008 Posts: 1,123Administrators [quote=natkhaung;7615]ကျွန်တော် နတ်ခေါင်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နာမည်ပေးတာတယ်ခင်ဗျ၊နည်းနညး်လောက်ရှုပ်ချင်လို့၊ ကူညီ ဖေးမ ကြပါခင်ဗျကိုနတ်ခေါင်းဆိုလဲ နတ်ခေါင်းပေါ့ ဘယ့်နယ် .. နတ်ချုပ်ကြီးရာထူးရတာပေါ့ဒါမှမဟုတ် မဲခေါင်တော်တော် ကြိုက်ပုံရတယ်နော် ..ဟိဟိ။ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ .. ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့ ... လေ့လာမယ် ဆွေးနွေးမယ် သင်ယူကြတာပါ့ဗျာ	Vote Up0Vote Down icefirester June 2008 Posts: 501Moderators [quote=natkhaung;7615]ကျွန်တော် နတ်ခေါင်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နာမည်ပေးတာတယ်ခင်ဗျ၊နည်းနညး်လောက်ရှုပ်ချင်လို့၊ ကူညီ ဖေးမ ကြပါခင်ဗျကြိုဆိုပါတယ် နတ်ခေါင်းနည်းနည်းလောက်ရှုပ်လဲ ရပါတယ်..များများရှုပ်လဲ ရပါတယ်...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နည်းပညာအကြောင်းတွေပေါ့..ချစ်စွာသော ice	Vote Up0Vote Down bhope June 2008 Posts: 223Registered Users [quote=mrdba;7656]ကိုနတ်ခေါင်းဆိုလဲ နတ်ခေါင်းပေါ့ ဘယ့်နယ် .. နတ်ချုပ်ကြီးရာထူးရတာပေါ့ဒါမှမဟုတ် မဲခေါင်တော်တော် ကြိုက်ပုံရတယ်နော် ..ဟိဟိ။ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ .. ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့ ... လေ့လာမယ် ဆွေးနွေးမယ် သင်ယူကြတာပါ့ဗျာကိုနတ်ခေါင်ရေ မဲခေါင်တော့မရှိဘူး။ မနေ့ညက ရွှေပတ်လေးတော့နဲနဲကျန်သေးတယ်။ ချအုံးမလား။နတ်ချုပ်ကြီးဆိုတော့လဲ..............................................နတ်ချုပ်ကြီးပေ့ါဗျာ။ ခေါင်းစားမယ်ဆိုလဲ ပုဇွန်ခေါင်းတော့သိပ် မတို်က်၊ ဟီး စားတတ်ရင် တရုတ်အမဲခေါင်းကတော့လွှတ်ကောင်းဗျ ။	This discussion has been closed.
June 2008 bhope
June 2008 icefirester
June 2008 MrDBA
June 2008 yeman
June 2008 ညမီးအိမ်
June 2008 Powered by Vanilla